Maamulka Ganacsiga Caalamiga – Koorso – Somalism Online Academy
Maamulka Ganacsiga Caalamiga – Koorso
Koorsadaan waa koorso ka kooban illaa iyo 5 mawduuc oo balaaran. Koorsadaan waxay ku baxaysaa afka Soomaaliga si bulsha weynta Soomaaliyeed wax badan ugu fahmaan Maamulka Ganacsiga Caalamiga. Sidoo kale waxaad si hagar la’aan ah ugu baran doontaa xirfada maamulka iyo maareynta, heerarka ay u qeybsanto maamulka iyo maareynta, fahanka dhaqaalaha iyo isbedelada suuqyada dunidda, dhaqaalaha, suukh-yada, qaababka heshiisyada u dhaxeeyo wadamada iyo canshuur bixinta.
Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo sida aad u bilaabi karto koorsadaan fadlan nagala soo xariir WhatsApp: +47 973 750 59
Waxaad ku baran doontaa koorsadaan:-
Hordhaca Maamulka Ganacsiga Caalamiga
Mabaadii’da Maamulka & Maaraynta
Ganacsiga Qaaska ah & Kuwa Dowladda
Qaababka Aas-aasiga Ee Lahaanshaha Ganacsiga
Doorka Yoolasha & Qorshe hoosaadyadu ay ku leeyihii Qorshaynta
Islaamka iyo Maamul Wanaaga
Qaababka heshiiska u dhaxeeyo wadamada iyo canshuur bixinta
Sifooyinka laga rabo Yoolasha
Sifooyinka Laga Rabo Maamulaha Wanaagsan
Seddaxda Heerar ay u Qeybsanto Maamulka iyo Maareynta
Culuumta Maamulka & Dhaqaalaha, Khayraadka
Faqriga Haysta Wadamada Qaar ee Dunidda?
Fahanka Dhaqaalaha iyo Isbedelka Suuqyada
Horumarinta Fanka iyo Xirfadda Maamulka
Sharaxaad guud iyo Gunaanadka Koorsada
15 Qoraalo Dheedheer
24 Saac Wey Furantahay
Ku Qaado Shahaado
43 thoughts on “Maamulka Ganacsiga Caalamiga – Koorso”
Abdulahi hassan Abdile
Waxaan rabaa inaan barto maadadaas
Abdulahi Koorsada waa diyaar sida kuu muuqato. Sidoo kale waxwalbo oo kamid ah cashirada waxay diyaar kuugu yihiin gudaha platformka naga. Haddii aad rabto in lagaa caawiyo sida aad isku qori lahayd fadlan halkaan WhatsAppka nagala soo xariir: +4797375059 adigoo raacinaayo koorsada aad u baahan tahay.
Hassan Mohammad Hassan
asc wll waxan ubahanahay in korsada ganacsiga afka soomaaliyeed ku baxayso
Hassan soo dhawaaw, sida Meesha kaaga muuqato koorsada waa diyaar. Isla hadda ayaad bilaabi kartaa ee maxaan kaa caawinaa? si’aan kuu caawino nagala soo xariir WhatsApp: +4797375059
Liban Abdulkadir Daud
I want that course
Liban soo dhawaaw. Koorsadaan waa diyaar sida kor kaaga muuqato. Isla hadda ayaad bilaabi kartaa waxwalbo waxaa laguugu diyaariyey Platformka naga haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo habka aad kubilaabi karto nagala soo xariir lambarkeena WhatsAppka +4797375059
Waa mahadsantahiin marka hore mida xigta lacagta shahadada mala hormarinaa mise gadaal ayan ka dhiibi karaaa
January 28, 2020 at 10:56 am
Lacagta shahaadada horumaris ma ahan ee gadaal ayaad ka dhiibi kartaa.
Ibrahim ali sheik
Asc dhaman dhalin yarad ka shaqeysay inii la barto sid loo shaqesto waa rajada kaliya ee maanta lagag boxi karo sabool nimad ku habsatay dalkeen somaliyee waana u bahanay coorsadan asxbta
Ibrahim waad ku mahadsantahay inaad nala soo xariirto. Sida kuu muuqato koorsada waa diyaar, sida kali ee aan kuu caawin karno ayaa ah inaad nagala soo xariirto WhatsAppka ama lambarkeena caadiga inaad naga soo wacdo. WhatsApp: 97375059 Tel: 91280644
Ahmed Mahad Dhurre
Wan u banahany course kan lkn shaqadada iyo course ka $30 miyey isku yihiin
Maya, shahaadada waxaa ka horeeyo inaad marka hore qaadato koorsada kadibna aad dalbato shahaadada. Haddii aad xiisayno isla hadda ayaad bilaabi kartaa waxwalbo waa qaab online ah mana ahan in macalinka qadka kuu soo galaayo ee waxwalbo waxaa laguugu diyaariyey Platfromka naga. Wixii caawimaad ah nagala soo xariir WhatsAppka naga +4797375059
Wan u banahany course kan lkn shahadada iyo course ka $30 miyey isku yihiin
arin na qusaysa weeyaan mahdsanidiin
Mohamud Ahmed Said
Maamulka sharafta leh aad bad u mahadsantihin, sida quruxda badan oo aad bulshadina ugu adeegeysan, aniga aad ayan ugu baahnahay course-dan , side iskaga diwangelinkara.
Mohamud waad isdiiwaan gelin kartaa ee waxaad u baahan tahay inaad gujiso formka buuxbuuxintiisa. Riix Hadda Biloow – kadibna halkaas kasii buuxbuuxi formkaaga. Haddii kale WhatsAppka naga nagala soo xariir +4797375059
Mohamed Abdimajid Mohamed
Asc course waan ubahanahay in lgu baranaa waa hal kee mesha lgu baranayo halii soo shego
Wcs Sidee tahay Mohamed, koorsada sida kaaga muuqato waa Online. Waana diyaar isla hadda ayaad bilaabi kartaa. Waxaad u baahan tahay oo kali inaad Fee-ga iska bixiso oo kali kadibna anaga ayaa kugu caawin karno qaabka aad u bilaabi karto. Haddii aad caawimaad u baahan tahay nagala soo xariir WhatsAppka naga +4797375059
Mohamed Da uud iisse
Hada inaan bilaaban raba mxan sameena
Wcs Sidee tahay Mohamed, waan ku mahadsan tahay inaad nala soo xariirto. koorsada sida kaaga muuqato waa Online. Waana diyaar isla hadda ayaad bilaabi kartaa. Waxaad u baahan tahay oo kali inaad Fee-ga iska bixiso oo kali kadibna anaga ayaa kugu caawin karno qaabka aad u bilaabi karto. Haddii aad caawimaad u baahan tahay nagala soo xariir WhatsAppka naga +4797375059
Abdimahad dahi Mohamed
Wan kahelay runti .
Bukhari shuayb Abdirahmam
Waxaan rabaa in koorsadaan bilaabo lkn Suaal baan qabaa Suashaydana Waa Shahaadada aan halkaan kaqaato Ma kubilaabi karaa jaamacada reer Galbeedka.
Soo dhawaaw Bukhari, waa inaad ogataa shahaadooyinkeena inaysan ahayd kuwa dugsi sare ah ee ay tahay mid aqoon-kaab ah, si aad noloshaada aqoon dhinacyo kala duwan u yeelato. Mana quseyso nidaam jaamacadeed.
Aad Baan Ugu Baahanahy Coursadan Sideen Ku Heli Karaa ?
Waxaan aragnay inaad xiisaynayso koorsada Maamulka Ganacsiga Caalamiga. Koorsadaan waa koorso ka kooban illaa iyo 5 mawduuc oo balaaran. Koorsadaan waxay ku baxaysaa afka Soomaaliga si bulsha weynta Soomaaliyeed wax badan ugu fahmaan Maamulka Ganacsiga Caalamiga. Sidoo kale waxaad si hagar la’aan ah ugu baran doontaa xirfada maamulka iyo maareynta, heerarka ay u qeybsanto maamulka iyo maareynta, fahanka dhaqaalaha iyo isbedelada suuqyada dunidda, dhaqaalaha, suukh-yada, qaababka heshiisyada u dhaxeeyo wadamada iyo canshuur bixinta.
Walaal waa diyaar koorsada sida aad aragto haddii aad u baahan tahay inaad iska diiwaan geliso fadlan iska diiwaan geli halka ay ku qoran tahay ‘Hadda Biloow kadibna buuxbuuxi foomka lagaa rabo kadibna adiga ayaa dooranaayo qaabka aad lacagta u bixinayso haddii VISA ama MasterCard ku bixinayso ama Mobile Payment sida EVC plus, Sahal, Zaad, E-dahab. Wixii faahfaahin dheer ah WhatsAppka nagala soo xariir: +4797375059
July 16, 2020 at 10:51 am
Asc courseka wan dhamayey qaasetan imtixanki Maamulka Iyo Ganacsiga Calamiga ah ee siden ku heli kareh Shahadedda Courseka ?
Haddii aad dhameysay cadeymo ayaa jira ee whatsAppka nagala soo xariir: +4745507363
Would you like to contact us on WhatsApp so we can help you WhatsApp: +47 973 750 59
Asc courseka wan dhamayey qaasetan imtixanki Maamulka Iyo Ganacsiga Calamiga ah ee siden ku heli kareh Shahadedda ?
Fadlan haddii aad dhameysay waxaad nagala soo xariir kartaa emailka naga ee aad ka heli karto gudaha webka naga ama haddii kale WhatsApp: +4745557579
Liibaan abdirizaak mohamed
Asc setahay walaal waad mahadsantahay sida wanagsan sad courseska aad ugu caawineyso walaalaha doonaya courseskas, aniga waxaan ahay qof daneenaya courseskas.
Hello, just wanted to mention, I loved this article. It was inspiring. Keep on posting!| а
Asc Somalism Online , Imtixanka wan qatey waxan ubehnahey shahadada
Wcs fadlan nala soo xariir si aan kaaga caawino qaadashada shahaadaada.
Koorsada haddii aad dhameysay qaabkeed isku diiwaan gelisay? yaa ku diiwaan geliyey? emailka naga nagala soo xariir adigoo raacinaayo cadeymaha ah inaad imtixaanka gashay info@somalism.org
MAhaysan courseka ladhoho international relationship
Maya laakiin waxaan kuu haynaa koorsada International Business Management https://somalism.org/course/maamulka-ganacsiga-caalamiga-koorso/
Haddii aad rabto waxaad nagala soo xariiri kartaa WhatsApp: +4745557579
Leave a Reply to AHmed yusuf Cancel reply
Somalism is a worldwide place for learning and teaching online courses where students are mastering new skills and achieving their goals.
Copyright © 2020 Somalism Academy. All rights reserved.